ဆား – ၁/၃ ဇွန်း (အချိုဇွန်း)
ပဲငံပြာရည် – ၁ ဇွန်း (အချိုဇွန်း)
ငရုတ်သီးစိမ်း – ၁ တောင့်
၁။ ခရမ်းချဉ်သီး အစိတ်စိတ်လှီးထားပါ။ ခရမ်းချဉ်သီးက ခပ်မှည့်မှည့်ဆို ပိုကောင်းပါတယ်။
ခရမ်းချဉ်းသီးကလွဲပြီး ကျန်တာတွေကို ဇလုံတလုံးထဲမှာ ထည့်ခလောက်ထားပါ။ ငရုတ်သီးစိမ်း ပါးပါးလှီး ထည့်ပါ။ ဒယ်ပေါ်မှာ ခရမ်းချဉ်သီးကို အပူပေးပြီး ဖိချေပေးပါ။ ကြေသွားရင် ကြက်ဥအရောကို ထည့်မွှေပြီး စက္ကန့် ၃၅ စက္ကန့် အကြာမှာ မီးပိတ်လိုက်ပါ။
ဒီကြက်ဥကြော်လေးက တော်တော်လေး ပျော့ပျော့အနေအထားမှာ စားမှ ပိုစားကောင်းတာပါ။ ခရမ်းချဉ်သီးရဲ့ အချိုအချဉ်အရသာ၊ ငရုတ်သီးစိမ်းရဲ့ အစပ် စတာတွေနဲ့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ကြက်ဥမွှေကြော် ရိုးရိုးလေးတခွက်ဟာ ထမင်း ပူပူနဲ့ အလွန်လိုက်ဖက်ပါတယ်။
This recipe is the easiest one andafavourite curry of our family. This was the easiest and the most delicious dinner that my husband and I have passed in those days when we didn’t feel like cooking in the early days of our marriage.
1 teaspoonful of soya bean sauce
Slice the tomato. It is better if the tomato is ripe.
Whisk all the other ingredients inabowl except the tomatoes. Cut the chillies into thin pieces and put them in. Heat and grind the tomato inawok. When they are grounded enough, stir in the egg mixture and turn the stove off after 30-45 seconds.
This scrambled egg is more delicious when it is quite soft.
This perfect and simple scrambled egg with the sweet and sour taste of tomato and the spiciness of the chillies isagreat match with warm rice.